Osisi obi ụtọ - MF.LY
Ọnweghị menu ekenyere
Osisi Obi Ụtọ
Nke Marc Fest dere
E nwere otu osisi dị n’akụkụ ebe ndịda nke ebe obibi Everglades nke mụ na David na-akpọ “Osisi Obi Ụtọ.” O nwere ike ịbụ ụkwụ 25 n'ogologo na ọ fọrọ nke nta ka obosara ya. Mụ na David nwere ụzọ pụrụ iche isi akpọ ihe ndị dị n'akụkụ ugbo. Dịka ọmụmaatụ, e nwere "Osisi Osisi mara mma" (nke nwere okooko osisi pink na-esighị ike) n'etiti "Jungle Quadrant" (ebe ahịhịa ugbu a bụ nke na-adịghị agafe na nke tojuru). E nwere “Osisi Ọkụ,” nke aha ya bụ maka nnukwu okooko osisi crimson ya. Mgbe Hurricane Irma meriri ya, n'oge na-adịghị anya, ụyọkọ "Osisi Ọkụ Nwa" tolitere n'ọnọdụ ya, na-eke ihe anyị na-akpọ ugbu a "Osisi Osisi Ọkụ."
Osisi obi ụtọ nwetara aha ya n'ihi ọmarịcha ọmarịcha okooko osisi pink ọ na-egwu maka izu asatọ na March na Eprel. Ha na-eme ka osisi ahụ nwee obi ụtọ dị ka nwatakịrị nwere obi ụtọ na-eji ejiji maka oriri na ọṅụṅụ.
Okooko osisi ndị ahụ dị ka brush na-akpụ isi. N'ihi ya, aha "kwesịrị ekwesị" nke osisi ahụ, "Osisi ahịhịa afụ." Aha sayensị ya bụ "pseudobombax elliptical." Ọbụna nke ahụ na-ada n'elu, dị ka aha okporo ụzọ maka ọgwụ psychedelic. "Ka anyị gaa mee ụfọdụ Pseudobombax taa." Ndị mmadụ na Central America n'ezie na-eme "ihe ọṅụṅụ na-egbu egbu" site na osisi dịka Wikipedia si kwuo.
Ma e nwere ihe ọzọ mere osisi a pụrụ iche. N'ime izu ole na ole mgbe ọ na-eto, n'abalị ọ bụla n'ihe dị ka elekere 10 nke abalị, ọ na-ewepụta okooko osisi ọhụrụ site na cylindrical casings. Osisi ahụ ga-eji brush ncha ntutu ndị a na-egbuke egbuke n'ụtụtụ. N'ụbọchị Florida na-ekpo ọkụ, okooko osisi ndị a niile, nke ọ bụla n'ime ha, ga-adaba n'ala n'isi ụtụtụ, na-eweghachi osisi ahụ dum na steeti na-enweghị ifuru n'etiti ehihie (n'ụbọchị oyi na-atụ, ha na-egide ruo mgbede. ). N'ụtụtụ echi ya, osisi ahụ guzoro ọzọ na ịma mma pink, nwere nnukwu ifuru ọhụrụ, juputara na aṅụ, ndị hummingbird ga-ejikọta ya ma emechaa n'ụtụtụ.
N'ime ụbọchị ahụ, mgbe ifuru ọ bụla dara, a na-enwe ụda mmetụta na akwụkwọ ndị a kpọnwụrụ akpọnwụ n'okpuru. Plop. Plop. Ọ bụ ụda na-emetụ n'ahụ nke ịma mma dị mkpụmkpụ na-agafe.
Mgbe ị na-anọdụ ala na veranda nke okpukpu abụọ, alaka osisi nwere obi ụtọ na-eme ka ọ dị gị ka ịnọ na mgbidi osisi. Mgbe m bụ nwata, ọ na-arọ m nrọ inwe ebe siri ike n'osisi n'otu n'ime osisi oak toro ogologo n'ụlọ m. Osisi obi ụtọ na-echetakwara m otu egwu akpọrọ “Enyi m, osisi ahụ” (“Mein Freund, der Baum”) nke onye German na-abụ abụ Alexandra dere. Alexandra nwụrụ n'ihe mberede ụgbọ ala na June 31, 1969, mgbe ọ dị nanị afọ 27. Egwu a na-ewute, maka osisi e gbuturu gbutuo nke na-abụbu enyi onye ọbụ abụ na nwata. Lelee egwu na egwu ya. Ha mara mma nke ukwuu.
Mụ na David nwere nchegbu na Osisi Obi Ụtọ ahụ nwere ike imebi ụlọ ahụ n'oge oké ifufe. Anyị tụrụ anya igbutu ya mana anyị enweghị ike iwepụta onwe anyị ime ya. Kama, anyị mere nke ọma trimming nke okporo osisi na alaka kasị nwee nsogbu. Mgbe nke ahụ gasịrị, ihe mere ka m buru otu n'ime iberibe iberibe, ikekwe otu ụkwụ ogologo na sentimita anọ na dayameta. Ọ dabara nke ọma n'otu n'ime obere alaka ụlọ ọrụ anyị hapụrụ ka o guzoro dị ka ihe mgbakwasị ụkwụ. N'ime ọnwa ndị na-esochi, ibe ahụ e bepụrụ wepụrụ sap wee jikọta onwe ya ma pulite akwụkwọ na ifuru ọzọ. Ọ dị ka ntakịrị anwansi.
Ya mere, Osisi Obi Ụtọ na-anọchi anya mmalite na njedebe. Mgbe ifuru ya na-amalite ito n'isi mbido March, a na-enwekarị otu ifuru n'elu osisi n'ụbọchị mbụ nke okirikiri ahụ. Ọ na-adị ememe ịhụ ifuru osisi Obi ụtọ nke mbụ nke oge. Ọnụ ọgụgụ nke okooko osisi na batch kwa ụbọchị ga-abawanye site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, na-eru n'ogo kachasị elu mgbe izu anọ ma ọ bụ karịa ga-ebelata ruo mgbe ụbọchị na-abịa na njedebe nke April na nanị otu ifuru ikpeazụ fọdụrụ n'elu osisi-ifuru ikpeazụ nke afọ ahụ. N'afọ a, emere m isi ihe na-eburu ya n'ala. Etinyere m ya na obere ite nwere mmiri. Ọ dị ndụ ụbọchị ole na ole ọzọ. Aga m echeta ime nke a site na iji ọtụtụ ifuru osisi Obi ụtọ n'afọ ọzọ.
Ozugbo okooko osisi na-apụ, osisi ahụ na-abanye n'oge akwụkwọ ya. Ka ọ na-erule ngwụsị May, ọ na-ejupụta akwụkwọ, na-ekpuchi anya ruo ọnwa isii na-esote ọdọ mmiri dị n'okpuru obere ugwu nke ụlọ anyị na-anọdụ ala. Malite na Nọvemba, akwụkwọ ahụ ga-ada ka ọ bụrụ ebe okooko osisi ga-alaghachi na mmiri. “Chineke chọrọ” ka nne m na-amasị ikwu. Ọ dịghị ihe doro anya, nyere vagaries nke ụwa.
Anyị na-akpọ ya Osisi Obi Ụtọ n'ihi na ọ na-eyi obi ụtọ, ọ na-emekwa ka anyị nwee obi ụtọ. Ma ọ bụghị ihe ma ọ bụrụ na ọ bụ osisi obi ụtọ n’ezie?
Ọ na-amasị m iche na ọ bụ.
[M ka na-arụ ọrụ na akụkọ a. Atụmatụ ndezi gị dị oke welcome.]
Vidio a na-egosi ifuru nke Osisi Obi Ụtọ n'akụkụ ọnụ ọgụgụ kasị elu nke okirikiri ha.
Iberibe osisi a kpara akpa nke jikọtara onwe ya na anwansi.
Otu oge ahụrụ m ikwiikwii a gbachiri emechi ka ọ nọ ọdụ na Osisi Obi Ụtọ.
Abụ "Enyi m, Osisi ahụ" nke Alexandra dere. Lelee ya lyrics.